गुगल पांडा एल्गोरिथ्म अपडेट
गुगलको "पाण्डा" एल्गोरिथ्म परिवर्तनमा मेरा विचारहरू
सोमबार, मार्च 7, 2011 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मसँग यसको एल्गोरिथ्ममा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्ने गुगलमा म मिश्रित भावनाहरू छन्। एक तर्फ, म उनीहरूलाई सुधार गर्न कोशिस गर्दैछु भन्ने तथ्यलाई कदर गर्दछु… किनकि म Google खोज परिणामहरूसँग असन्तुष्ट छु। पहिले आज मैले ब्लगि onमा केहि तथ्या for्कहरू खोज्दै थिए ... र परिणाम भयानक थिए:
यदि तपाइँ परिणामहरूमा एक नजर राख्नुभयो भने ... र पृष्ठबाट पृष्ठमा जानुहोस्, यस्तो देखिन्छ कि गुगलले ठूला साइटहरूमा कम ध्यान दिइरहेको छ र साना साइटहरूमा बढी ध्यान दिइरहेको छ। समस्या यो हो कि मैले खोज्ने परिणामहरू बिल्कुल विपरीत छन्। केहि तर्क गर्न सक्दछ कि गुगल सम्भवतः मेरो उद्देश्य बुझ्न सक्दैन ... सत्य होईन। गूगलसँग मेरो खोज बान्कीमा इतिहासको एक बर्षको मूल्य छ। त्यो ईतिहासले मलाई पछ्याउन रुचि भएको शीर्षकहरूमा इनपुट प्रदान गर्दछ।
भर्खरको गुगल अपडेट, अन्यथा रूपमा चिनिन्छ पान्डा अपडेट (विकासकर्ताको नाम पछि), गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने थियो। समस्या, धेरै एसईओ मान्छेहरू द्वारा वर्णन गरे अनुसार, उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो समय थियो सामग्री खेती। सबै ईमानदारी मा, म वास्तव मा प्रयोगकर्ताहरु को धेरै गुनासो देखेको थिएन ... तर Google उद्योग को दबाब अन्तर्गत caved भएको देखिन्छ।
यदि सानो सामग्री साइटहरु ठूलो साइटहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ थिए, म बिल्कुल बुझ्छु। वेबको डेमोक्र्याईजेसनमा बाधा ल्याउने कुनै पनि कुरा ठीक गर्नु पर्दछ। म विश्वास गर्दिन गुगलले वास्तवमै समस्या समाधान गर्यो, यद्यपि। यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूले भर्खरै पार्श्व शिफ्ट गरे ... एउटा प्वाल प्लग गर्दै गर्दा अधिक चुहावट सुरु भयो। एल्गोरिथ्म परिवर्तनले प्रमुख त्रुटिको सुधार गर्‍यो - ठूला साइटहरू ठूलो संख्यामा उच्च वर्गीकरण पृष्ठहरू नयाँ पृष्ठहरूमा सजीलो सजीलो भएको देखिन्थ्यो।
अर्को मुद्दा, अवश्य पनि, अब ठूला साइटहरू छन् जुन वास्तवमा स्तर श्रेणीकरण पृष्ठहरूको एक ठूलो मात्रामा छ ... तर क्रिपी पृष्ठहरूको एक सानो प्रतिशत, अब बोर्ड भर रैंक ड्रप। एक साइटमा लगानी गर्ने र हजारौं पृष्ठहरूको निर्माण गर्ने कल्पना गर्नुहोस्, केवल रातो रातमा तपाइँको साइटको रैंकिंग खण्डमा फेला पार्नको लागि किनभने तपाइँसँग केहि पृष्ठहरू पनि रहेका छन्। परिणामस्वरूप ड्रप पहिले नै केही कम्पनीहरु महँगो छ।
यो ब्लगसँग २,2,500०० भन्दा बढी ब्लग पोष्टहरू छन्। पक्कै पनि तिनीहरू सबै वर्ग "A" सामग्री होइनन्। प्रदान गरियो, यस ब्लगको आकार धेरै सामग्री फार्महरूसँग तुलना गर्दैन जुन सयौं हजारौं वा लाखौं पृष्ठहरू छन्। जे होस्, म अझै पनी छु खेती गर्दै... खोज, सामाजिक, मोबाइल र अन्य मार्केटिंग प्रयासहरूमा सान्दर्भिक बिभिन्न विषयहरूको लागि श्रेणी बनाउन प्रयास गर्दै। मलाई यकिन छैन कि मैले सामग्री फार्मको रूपमा देख्नु अघि मैले कति सामग्री सिर्जना गर्नुपर्नेछ ... र त्यस अनुसार सजाय पाएँ ... तर म यसको बारे साँच्चिकै खुसी छैन।
एसईओ को पुरानो रहस्य यति गोप्य थिएन। सान्दर्भिक सामग्री लेख्नुहोस्, कुञ्जीशब्दहरू प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईंको पृष्ठहरू ठीकसँग संरचना गर्नुहोस्, तपाईंको साइट डिजाइन गर्नुहोस् जुन सामग्रीको लाभ उठाउनको लागि ... र यसबाट हेकलाई प्रमोट गर्नुहोस्। प्रभावी कुञ्जी शव्द प्रयोग र प्लेसमेन्टले तपाईंलाई सही नतीजाहरूमा प्राप्त गर्दछ… र त्यो सामग्री अफ-साइटको प्रचारले तपाईंलाई राम्रो स्थानमा ल्याउँदछ। नयाँ रहस्य वास्तवमा थाहा छैन। उद्योगमा हामी मध्ये तिनीहरू अझै के गरिरहेको छ भनेर बुझ्नको लागि अझै चिच्याइरहेका छन्। गुगल पनि यसमा हस-हस छ, त्यसैले हामी आफ्नै आफ्नै छौं।
सत्य भन, म निराश छु कि गुगलले सोच्दछ कि यो एक राम्रो विचार हो 12% रातमा सबै खोजी परिणामहरु लाई प्रभाव पार्न। त्यहाँ छन् यस गडबडीमा शिकार - तीमध्ये कतिपय मेहनती सल्लाहकारहरू जुन उनीहरूका ग्राहकहरूको लागि खोजिरहेका थिए उनीहरूलाई उत्तम उत्तम सल्लाह प्रदान गर्न। गुगलले पछाडि ब्याकप्याड पनि गर्नुपर्‍यो र परिवर्तनहरू रिट्याक गर्नुपर्‍यो।
गुगल आक्रामक रूपमा एसईओ उद्योग र शुरू गर्‍यो प्रचारित अनुकूलन उनीहरूको नतिजाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रयास गर्न। हामीले यो खेलेनौं, जस्तो कि CNN सुझाव दिन्छ... हामी सबै अध्ययन, प्रतिक्रिया र प्रदान सल्लाह मा कार्य गरीरहेका छौं। गुगलले सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न कडा मेहनत गरेका छौं सोधे हामीलाई। हामीले कार्यक्रमका लागि भुक्तान गरेका छौं र कार्यक्रममा भाग लियौं जुन मान्छेले मन पराउँछन् मत्ती Cutts प्रचार गर्न जारी राख्नुहोस्। हामीले ठूला ग्राहकहरूसँग काम गर्‍यौं र उनीहरूको सामग्रीको पूर्ण लाभ उठाउनको लागि मद्दत गर्‍यौं ... मात्र अब कार्पेट हाम्रो मुनिबाट बाहिर निकाल्नको लागि। गुगलले विकिपेडिया जस्तो साइटहरूलाई संकेत गर्दछ गुणस्तर साइटहरू ... तर साइटले दण्डित गरेको छ जहाँ सामग्री वास्तवमा खरिद गरिएको छ र व्यक्ति लेख्नको लागि काममा लिइएको छ। फिगर जानुहोस्।
गुगल गरे परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यद्यपि परिवर्तनको कठोर प्रकृति र गुगलको कुनै चेतावनीको अभाव अनावश्यक थियो। गुगलले किन ठूला प्रकाशकहरूलाई केवल चेतावनी दिन सकेन कि त्यहाँ एल्गोरिथ्म थियो जुन 30० दिनमा कार्यान्वयन हुने थियो जसले ठूला प्रकाशकहरूलाई उनीहरूको पृष्ठहरू अझ विस्तृत र गुणमा विकास गर्नका लागि पुरस्कृत गर्छन्? किन विशेष पूर्वावलोकन वा स्यान्डबक्स वातावरण प्रयोग परिवर्तन गर्नुभएन? कमसेकम कम्पनीहरु यातायात मा एक ठूलो ड्रप को लागी तयार गर्न सक्छ, आफ्नो अनलाइन विपणन प्रयासहरु अधिक विविधता, र केहि (धेरै आवश्यक) सुधार गर्न सक्छ।
एउटा विशिष्ट उदाहरण ग्राहक हो जुन म काम गर्दै छु। हामी पहिले नै राम्रो ईमेल, मोबाइल र सामाजिक एकीकरण बनाउँदै थियौं - र प्रतिक्रिया लुप जहाँ पाठकहरूले उनीहरू पढिरहेका सामग्रीको गुणस्तरलाई संकेत गर्न सकीन्छ ताकि यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। यदि हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ एल्गोरिथ्म अपडेट हुन गइरहेको छ जुन साइटको ट्राफिकको %०% ड्रप गर्ने थियो, हामीले ती रणनीतिहरूलाई जारी राख्नको सट्टा जीवित रहन कडा मेहनत गरेका छौं। tweak साइट। अब हामी संघर्ष गरिरहेका छौं उठ्नुहोस्.
युट्यूबबाट लिंक जुस कसरी पाउने
मार्स 8, 2011 मा 3: 36 एएम
मेरो कुनै पनि साइट Farmer अपडेट मा चोट गरीएको थिएन। या त मेरो ग्राहकहरु को कुनै पनि छैन। मँ विश्वास गर्दछु किनकि सामग्रीको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यस सामग्रीको लि links्कको गुणस्तर र अधिकार अझै पनि दिन नियम गर्दछ। यो पहिलेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ कसरी दुई सिधा सम्बन्ध गर्न।
मलाई एक साइट देखाउनुहोस् जुन तलतिर बाम्पिएको थियो, म तपाईंलाई लि link्क प्रोफाइलमा प्वालहरू देखाउँछु जस्तो अरूको तुलनामा हासिल गरेको छ। यो हरेक अपडेटको साथ यस्तो हुन्छ, यसमा के नाम दिइएको छैन भन्ने फरक पर्दैन। "ठूला" साइटहरू आवाश्यक रूपमा हराउँदैनन् ... केवल अधिकार साइटहरू जुन तिनीहरूको स्थिति सुधार गर्दैनन्। "ठूला" साइटहरु पनि धेरै धेरै खुर्किन्छन्, र त्यसले सहयोग गर्दैन।
थप रूपमा, म विश्वास गर्दछु गुणस्तरीय सामग्रीको एल्गो सूचकहरू उच्च पारिएको छ र केवल "राम्रो र मौलिक" शब्दहरू भन्दा बढी खोज्दै छ। त्यहाँ आला को लागी मान्य भाषा, एपी स्टाईलबुक विचारहरु, प्लेटफर्म (उदाहरण को लागी ब्लग वा स्थैतिक) र पढ्न योग्यता स्कोर सहित धेरै कारकहरु छन्।
थप्पडमा हालेको हाई प्रोफाइल साइटहरू (ezinearticles, mahalo) मैन्युअल पेन्सनको शिकार थिए। तिनीहरू बज हल गर्न को लागी उद्देश्यका उदाहरणहरू थिए। यी मानवीय समीक्षा भएका थिए र मानिस पक्षपाती छन् ... त्यसकारण केही "राम्रो" साइटहरू जस्तै म्याकको म्याक पनि नेल भयो ... मलाई लाग्छ म्याक मानिसहरू अहंकारी र अहंकारी छन् र म्याकको बारेमा पनि साइट थप्पड गर्छु। LOL j / k
मार्क्स 8, 2011 मा 9: 59 PM
अप्रिल 13, 2011 मा 8: 40 एएम
ओह होस .. गुगलको "पाण्डा" एल्गोरिथ्म परिवर्तन .. http://www.hayatoglunakliyat.com
सेप्टेम्बर 5, 2011 मा 6: 24 AM
waaaaahhh… .. गूगल पांडा बुट निराशा …… hehehehehe…।